Congo Democratic Democratic Of The
Mpaghara French Southern Territories
Nwoke (Isle nke)
Nụrụ na McDonald Islands
Obodo Turks na Caicos
Obodo Virgin (British)
Obodo Virgin (US)
Obodo Wallis na Futuna
Papua ọhụrụ Guinea
Saint-Martin (nke French)
Svalbard na Jan Mayen Islands
Vatican City State (Nsọ Lee)
Ógbè Palestaịn bi
Koodu Nzipu API - Nweta data Worldal Code Koodu
Lookup Koodu nzipu ozi, nweta uzo akara koodu nile di anya na otutu ihe ndi ozo site na koodu nzi API.
Data zuru ụwa ọnụ
Mfe iji API
PostalCodes.app bụ ngwa ọrụ na-enye gị ohere inweta ozi na koodu nzi ozi dị iche iche gburugburu ụwa. Nwere ike ịnweta koodu nzi ozi na ntanetị dị kilomita ma ọ bụ kilomita ma ọ bụ kilomita ma ọ bụ nweta nkọwa nke koodu nzi ozi n’ozuzu ya.
GET Nweta Koodu Nzipu Ozi n'ime anya
N'iji mfe iji njedebe, ị ga - enweta ndepụta nke koodu nzi ozi ndị dị n'ime anya. Ihe atụ arịrịọ ahụ ga-eweghachite ndepụta nke koodu nzi pụrụ iche, ndepụta zuru oke nke koodu nzi ozi na nkọwa nke koodu nzi ọ bụla.
API anyị na-anabata nha anya na kilomita (Ndi an-kpọ) ma ọ bụ kilomita.
Changegbanwe nha rue kilomita ị ga-etinye ms na arịrịọ gị:
Nzaghachi ga-adị ka nke a:
GET Nweta Koodu nzi ozi nkọwa
Ihe atụ na-esote ga-alọghachi nkọwa nke koodu nzi ozi dabara na ajụjụ ọchụchọ.
GET Nweta data omenala
Ị nwere ike gafee extra params inweta naanị ihe dị gị mkpa na ihe, dị nnọọ tinye uru fields na gị arịrịọ.
+94 Mba ndị akwadoro
GF (Guiana French)
GG (Guernsey na Alderney)
HR (Croatia (UK))
IM (Nwoke (Isle nke))
MH (Islands Marshall)